Luis Suarez oo soohooyay guushii barcelona ay kagaartay man city 2-1 | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Luis Suarez oo soohooyay guushii barcelona ay kagaartay man city 2-1
Manchester City ayaa la baray cashar tartamada Yurub ah iyadoo guuldarro xanuun badan ay ku soo gaartay gurigooda xilli Barcelona ay wacdarro ku dhigtay Etihad Stadium.
Labo gool oo ka yimid Luis Suarez ayaa Barcelona u dhiibay koontaroolka wareegaan ka hor inta uusan Sergio Aguero nafta ku soo celinin Man City isagoo gool u dhaliyay qeybtii labaad.
Si kastaba, labadaas gool ee gurigooda looga dhaliyay ayaa ka dhigeysa kooxda heysata horyaalka Premier League inay la soo baxdo wax walba oo awoodeeda ah marka ay seddex isbuuc ka dib booqdaan Camp Nou lugta labaad.
Waxaan halkaan idin kugu soo gudbineynaa shan waxyaabood oo laga bartay kulankii xalayto ee Champions League:
Manuel Pellegrini Waa Tababar Ku Qamaara Shaxdiisa
Ka dib markii uu arkay kooxdiisa oo la iska heystay muddo ka badan 180 daqiiqadood sannadkii hore, waxa sharad lagu gali karay waqtigaan in tababaraha Man City uu feejignaan dheeri ah muujin doono kulankii xalayto ee lugta hore. Laakiin fekerkaas daaqada ayuu ka baxay islamarkii uu ku dhawaaqay shaxdii uu kala hortagayay Barca.
Pellegrini ayaa ka yaabsaday cid walba isagoo afka hore ku soo wada bilaabay Edin Dzeko iyo Sergio Aguero, halka James Milner lagu soo daray afarta khadka dhexe. Dad badan ayaana filanayay in Fernandinho uu boos heli doono si uu dhexda u adkeeyo, laakiin Pellegrini ayaa qamaar ciyaaray isagoo doonayay inuu ka weeraro Barca halka ay ugu jilcan yihiin oo ah daafaca. Dabcan kuma uusan guuleysanin qorshihiisa.